Ebe a na -ahụ anya kacha mma, ogidi mgbidi 3d, taịlị na -ada ụda, ndị na -emepụta ihe na -emepụta ụda olu na -emepụta ihe. Vinco
Ogwe ụda osisi
Ogwe osisi osisi
Ogwe osisi polyester acoustic
Ogwe ajị anụ
Ihe na -adọrọ adọrọ ụda
Nnukwu vinyl buru ibu
Ihe mgbochi ụda
Igwe mkpuchi ụda
Ụlọ mgbatị ahụ
Ụlọ ntu na -enweghị ụda
Acoustic na -agbagha
Ihe mkpuchi ụda
Ụlọ akwụkwọ & ụlọ akwụkwọ
Hotel & Ụlọ oriri na ọtaụtaụ
Ụlọ ihe ndekọ
Gịnị kpatara Vinco
Mission & Ọhụụ
Ihe mkpuchi mkpuchi ụda
Ọdọ bass ọnya
Acoustic board, boardproof sound, sound kewapụrụ pa ...
Iko iko ogwe osisi, ọnụahịa ogwe osisi, ụda ...
N'uko n'ígwé ojii, kwụsịtụrụ now panel
Onye na -agbasa osisi maka studio
Uwe mkpuchi osisi, ogwe osisi ajị osisi, osisi ...
Nnukwu vinyl 2lb, ihe mgbochi vinyl
Ihe mgbochi ihe mkpuchi, ákwà ngebichi, blanket mkpuchi
Okwu: Mpaghara Mmepe, BaoYunda Center, Xixiang Road, Xixiang Town, District Baoan, Shenzhen, China.
Igwe a na -ahụ anya, ogidi mgbidi 3d, taịlị acoustic, panel absorption acoustic
Igwe a na -ahụ anya, ogidi mgbidi 3d, taịlị acoustic, panel absorption accoustic sitere na 100% polyester, site na nhazi ntụtụ agịga. Usoro mmepụta ahụ bụ anụ ahụ zuru oke & enyi na enyi, enweghị mmiri na-ekpofu, anwuru, ihe mkpofu ,. enweghị nrapado, Ọdịdị porous nke kọlụm na -eme ka ọ bụrụ ụda na -amị amị & nke na -ekpo ọkụ.
Ogwe ụda PET anyị PET adịghị egbu egbu, anaghị egbu egbu, anaghị ewe iwe ma ọ nweghị ihe nchekwa formaldehyde ma nwee mkpuchi ụda dị elu (NRC: 0.85).
Ogwe osisi polyester fiber acoustic
A na-eji ogwe osisi 100% mee polyester fiber accoustic panel, mgbe etisasịchara ya na owu. Anyị na-ejikwa igwe ọkụ dị iche iche erute njupụta dị iche iche wee jide n'aka na ikuku ikuku ya, nke na-eme ka ọ bụrụ ngwaahịa ịmịkọrọ ụda na ngwaahịa mkpuchi.
Aha ngwaahịa Ogwe osisi polyester fiber acoustic
Akụrụngwa 100% eriri polyester dị elu
Nha 1220*2440*9/12mm (enwere ike ịhazi oke ọzọ)
Njupụta 160- 229kg/M3
Agba Chaatị agba
Mmetụta na -adọrọ ụda 0.85
Ọkụ na -eguzogide Ọkwa B1
Gburugburu Ọkwa E1
Ọdịdị n'akuku Chamfer, kwụ ọtọ
Ngwa Studio, ụlọ akwụkwọ ọta akara, sinima, studio, wdg.
Ihe onyonyo ogwe osisi polyester fiber:
Uru nke panel polyester fiber acoustic:
1) Ntinye dị mfe
2) Eco, Enweghị isi, nchekwa yana ịdị ọcha
3) Mmetụta ịchọ mma dị mma, yana ihe karịrị ụdị agba 40
Ngwa polyester fiber acoustic panel:
A na-ejikarị ya eme ihe n'ụlọ opera, ihe nkiri na ụlọ ihe nkiri telivishọn, ụlọ ihe nkiri, ụlọ mgbasa ozi, ụlọ ọrụ telivishọn, ụlọ nwere ọtụtụ ọrụ, ụlọ ọgbakọ, ụlọ ihe nkiri, ụlọ mgbakọ, ebe ntụrụndụ na obodo ntụrụndụ, ụlọ oriri na nkwari, KTV, wdg.
Mbupu & mbukota:
Ngwongwo a ga -ebuba na akpa akpa
Ụgbọ njem: Site n'oké osimiri ma ọ bụ ikuku
1. Ọkachamara-Anyị nwere ndị ọrụ na-ere ahịa ọkachamara. A ga -aza ajụjụ ọ bụla n'ime awa 24.
2. Ọnụahịa-Maka na anyị bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, yabụ anyị nwere ike ịnye ngwaahịa dị elu na ngwaahịa dị ọnụ ala.
3. Ọrụ-Ọ dị mfe ma dịkwa mfe ibufe, anyị na-ekwe nkwa ụbọchị nnyefe oge, yana ezigbo ọrụ ire ahịa.
4. Otu-Anyị nwere ngalaba injinịa nke anyị, dịka arịrịọ gị siri dị maka ịkwa akwa emere maka ngwaahịa gị.
1. Anyị nwere oke ọ gladụ na onye ahịa na -enye anyị aro maka ọnụahịa na ngwaahịa.
2. Ọ bụrụ na ajụjụ ọ bụla, biko mee ka anyị mara ya na mbụ site na Email ma ọ bụ Ekwentị. Anyị nwere ike ịnagide ha maka gị n'oge.
Ụlọ ọrụ nleta:
1. Ọ bụrụ na onye ahịa nwere usoro ihe ọ bụla na China, biko mee ka anyị mara. Ọ ga -amasị anyị inyere gị aka debe ụlọ nkwari akụ ahụ wee kpọpụta gị n'ọdụ ụgbọ elu, ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè.
2. Nsogbu ọ bụla ọzọ, biko nweere onwe gị ịrịọ, anyị ga -anwa ike anyị niile ịnye gị!
Na -atụ anya inyocha obi ọma gị
Nke gara aga: Ọdọ bass ọnya
Osote: Akụkụ mpịachi, mgbidi mpịachi mpịachi
Q: Ogologo oge ole ka ị ga -ewe iji mee nlele?
A. Ọtụtụ anyị ga -ewe ụbọchị 1 ~ 7 iji mee nlele.
Ajụjụ: Gịnị bụ oge nnyefe gị?
A. Oge nnyefe dị n'ime ụbọchị 15-25 mgbe anyị nwetasịrị nkwụnye ego.
Ajụjụ: Ị ga -akwụ ụgwọ nlele ahụ?
Ihe nlele A.Standard bụ n'efu, mana atụpụtara ahaziri ahazi ga -akwụ ụgwọ ezi uche dị na ya yana ebubo ibu. Mgbe ekwenyechara n'iwu a, anyị ga -akwụghachi ụgwọ awara awara. Biko nwee obi ike na nke ahụ.
Ajụjụ: Gịnị bụ usoro ịkwụ ụgwọ gị?
A: Ịkwụ ụgwọ <= 1000USD, 100% tupu oge eruo. Ịkwụ ụgwọ> = 1000USD, 30% T/T tupu oge eruo, itule tupu mbupu.
Ajụjụ: Ị nwere ike ịnabata OEM?
A: Ee, dị ka onye nrụpụta, anyị nwere ike mepee ebu iji mepụta ngwaahịa panel ọ bụla dị ka nlele ma ọ bụ eserese gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọzọ, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị, daalụ!
Ihe mkpuchi polyester
Ogwe mgbidi 3d mara mma, mkpuchi ụda na -ada ụda, ...
Ogwe na -adọrọ adọrọ, panel ụda 3D, na -amị m ...
Acoustic panel soundproofing, now wall til ...
Ihe mkpuchi mkpuchi Shenzhen Vinco Co., Ltd. bụ ọkachamara na ihe mkpuchi ụda ruo ọtụtụ afọ ma nye ya R&D, mmepụta, ahịa na ọrụ ịre ahịa ngwaahịa.